स्मृतिमा समाजसेवी गोपाल गुरुङ | eAdarsha.com
सबैभन्दा पवित्र सेवा नै समाज सेवा हो । पवित्र भएर पनि यो एउटा गारो विषय हो । जो कोहिले गर्न नचाहने र सबैको बसको कुरा नभएको सेवा समावसेवा हो । यसमा समय, लगनशिलता, धैर्यता, इमान्दारिता र अनुशासनको खाचो हुन्छ । चारित्रिक गुणको खरेडी लागेको आजको समयमा मानिसमा यी सबै गुण पाउनु सारै गारो छ । धन, समय र लगनशिलता खर्चेर समाज सेवामा लाग्ने विषय धेरैको लागि प्रिय हुन सक्दैन । समाज सेवा सगरमाथा भन्दा अग्लो र सागर भन्दा गहिरो हुन्छ भनेर बुझ्ने मानिस कम हुन्छन् र त्यसलाई बुझ्ने मध्येका एक हुनुहुन्थ्यो पूर्व गा.वि.स. अध्यक्ष तथा वरिष्ठ समावसेवी स्व. गोपाल गुरुङ्ग । जसरी फूलको थुङ्गाबाट रसस्वादन गरेर मह निकाल्ने काम मौरीले मात्र गर्न सक्दछ त्यस्तै मौरीको स्वरुपमा हामीले हाम्रा प्रातःस्मरणीय दाजु गोपाल गुरुङ्गलाई लिन सक्छौ । उहाँ हरेक क्षेत्रमा सम्भावना देख्नु हुन्थ्यो र नयाँ सोच र नयाँ उर्जाका साथ नयाँ नयाँ काम गर्न रुचाउनु हुन्थ्यो । एकता नै शक्ति हो भन्न्ने कुरामा विश्वास राख्ने उहाँले त्यसलाई गुरु मन्त्रको रुपमा पालना गर्न सबैलाई आग्रह गर्नु हुन्थ्यो । फलस्वरुप गाउँदेखि पोखरा र काठमाण्डौसम्म विभिन्न उद्देश्य भएका अनेकन सामाजिक र उपभोक्ता समुह गठनमा उहाँको महत्वपूर्ण योगदान रहेको पाउछौं ।
लेखक पञ्चासे सुनाखरी गोपाल स्मृति पार्क निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष हुन्।सं.